भारतले नेपाललाई भन्यो, ‘लिपुलेख हाम्रो हो’ – Karnalisandesh
भारतले नेपाललाई भन्यो, ‘लिपुलेख हाम्रो हो’
प्रकाशित मितिः २८ बैशाख २०७७, आईतवार १०:०९ May 10, 2020
काठमाडौँ। भारतले कोरोना महामारीको मौका छोपेर पश्चिम नेपालको कालापानिमा सडक उद्घटान गर्यो। रौतहटमा दशगजा मिचेर बाँध निर्माण गरिरहेको छ।
यता नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा भारतलाई दियो। तर, बिडम्बना नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले फर्काए। यस जवाफले के कुरा बताउछ भने भारतले नेपाललाई कसरी हेरिरहेको छ ? यता नेपाल सरकारका प्रधामन्त्री केपि शर्मा ओली समकक्षि मोदीसँग उच्च लेभलको वार्ता गर्दैनन्।
कुटनीतिक तवरले वार्ता गर्ने बताउछन्। तर, भारतले एकहोरो सडक निमार्ण गरिरहन्छ। सीमा मिचिरहन्छ। देश मरिरहेको छ। हामी बाँचिरहेका छौं। पुर्खाले मरेर जोगाएको देश मरिरहँदा हामी लाचार भएर बाँचि रहेका छौं। सकारात्मक कुरा भनेको विदेशी हस्तक्षेपका विरुद्ध प्रतिरोध गर्नुको विकल्प नभएको आवाजहरु उठ्न थालेका छन्।
लिपुलेकमा नयाँ सडक उद्घाटनपछि देखिएको विवादबारे भारतले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सडक निर्माण गर्ने भारतीय पक्षको कदमप्रति आपत्ति जनाएको थियो। जवाफमा भारतले सडक निर्माण गरिएको भूभाग उत्तराखण्ड राज्यस्थित पिथौरागढ जिल्लाको आफ्नै भूभाग रहेको दाबी गरेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका विशेष प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘९ मेइ २०२० मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा सडक उद्घाटनसँग सम्बन्धित रहेको जारी गरेको विज्ञप्ति हामीलाई प्राप्त भएको छ।
भर्खरै उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा उद्घाटन भएको सडक सम्पूर्ण रुपमा भारतीय भूभागमा पर्छ। यो रुट कैलाश मानसरोवर जाने धर्मालम्बीले प्रयोग गर्दै आएका थिए। वर्तमान परियोजनाअन्तर्गत सोही रोडलाई दर्शनार्थी, स्थानीय र व्यापारीलाई सहज हुनेगरी बनाइएको हो।’
विज्ञप्तिमा सीमानाका विषयमा छलफल गर्न नेपाल र भारतले संयन्त्र स्थापना गरेको र सीमाका विषयमा छलफल चलिरहेको उल्लेख छ। त्यस्तै, सीमा विवादलाई कुटनीतिक संवादबाट टुंग्याउन भारत प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै, विदेश सचिवस्तरीय संवादको समय निर्धारण गर्ने विषय प्रतिक्रयामै र दुबै देशले कोभीड–१९ को चुनौती सामना गरेपछि छलफलको मिति तय गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
राप्रपाको अध्यक्षमा लिङ्देन विजयी
कर्णाली कांग्रेस सभापतिमा कसले मार्ला बाजी ?
भूगोल सदस्यमा सुशीला गिरीको उम्मेदवारी
प्रदेश सदस्यमा अशोक योगीको उम्मेदवारी